Maritime Ebooks List ! ~ MSU Portal
11/15/2012 05:30:00 PM winsu pyae3comments
Union ကနေခုလိုဖိတ်ခေါ်လို့ လေးစားစွာနဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်၊ အင်တာနက်မှာတွေ့ရှိထားသမျှတွေကို အချိန်ရတာနဲ့အမျှညီနောင်များကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါမယ်။ မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့Certificateတွေအားလုံးသူခိုးအခိုးခံရပြီး အရမ်းကိုစိတ်ညစ်နေလို့ အင်တာနက်တောင်သိပ်သုံးဖြစ်မယ်မထင်တော့ပါဘူး။
ဒီ link ကတော့ ဖေါ်ပြပါ ပုံ ခေါင်းစဉ်အတိုင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေစွာနဲ့ဒေါင်းနိုင်ကြပါစေ။
နောက်ထပ် link တစ်ခုကတော့ -
Nautical Chart User's Manual ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ မိမိ download လုပ်ထားပြီးသားပါ၊ ခုတော့ ခုတော့ အားလုံးကို တစ်ကစပြန်ဒေါင်းရပါတော့မယ်၊ 500 Gb external HDD ပါ ခိုးရာပါသွားလေတော့ အကုန် ကုန်ပါပြီဗျား။ မိမိဒေါင်းရင်းနဲ့ ဒေါင်းသမျှအားလုံးကို မျှဝေပေးသွားပါမယ်၊
Link တွေက click လို့မရရင် copy လုပ်ပီး Search engine ရဲ့ box တွေထဲကိုထည့်ပြီးဒေါင်းရင်ရသလို ဒါမှမဟုတ် မိမိတို့ gtalk မှာတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်း link ကိုထည့်လိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ရင် ဒီလင့်ကactive ဖြစ်သွားပီး တိုက်ရိုက် gtalk boxထဲမှာအပြာရောင်လေးနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး Mouse Cursor ထောက်လိုက်ရင် လက်ပုံပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ click လိုက်ရင် မီဒီယာဖါးယား ဆီရောက်သွားပါလိမ့်မယ်၊ သိသူများအတွက်တော့မရည်ရွယ်ပါဘူးနော်၊ တချို့မလုပ်တတ်မှာ စိုးလို့သာ လေကြောရှည်မိတာပါ၊ နားလည်ပေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့ဘဲ ပြန်ပါတော့မယ်၊ သုံးစရာကိုယ်ပိုင်စက် မရှိတော့လေတော့ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါ ဖြစ်နေလို့..
November 18, 2012 at 10:42 AM Reply
ဟုတ်ကဲ့ပါ အကို ။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ ။ နောက်လည်း အားရင် အားသလို အင်တာနက် သုံးဖြစ်ခဲ့ရင် အခုလို ဝေမျှပေးပါအုံးဗျာ ။ MSU @ facebook မှာ ပါဝင်အားဖြည့်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ။
on behalf of MSU TEAM
November 20, 2012 at 8:21 PM Reply
March 6, 2013 at 4:30 PM Reply
တချို့ စာအုပ်တွေက downမရဘူး ဖြစ်နေတယ် အကို. .အကိုတင်ပေးတဲ့ စာအုပ်တွေကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ် ဗဟုသုတလည်းရပါတယ် ဒါပေမယ့် mediafire link ကdeleted ဖြစ်နေတော့ စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ဗျာ ဖြစ်နိုင်ရင်
အကိုပြန်စုထားသမျှ ebooks တွေပြန်share ပေးပါလားခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ